vaovao momba ny raharaham-barotra 2
Miaraka amin'ny fampandrosoana any an-trano sy any ivelany, dia midina tanteraka ireo karazan-tsonia mahazatra any an-tsena avy any ivelany, ary tena lehibe ny fanjifana hose-close, indrindra fa ny karazan'entana mahazatra. Na izany aza, miaraka amin'ny fampandrosoana ny haitao teknolojia, indrindra tao anatin'ny roa taona izay, dia nanatona ny saturation ny tsena anatiny, nitarika fifaninanana tsena masiaka. Ny sasany mpanamboatra aza dia nanao ady vidiny ary nitarika korontana manerana ny tsena, izay tsy mifanaraka amin'ny fampandrosoana ny indostria manontolo. Raha ny tena izy dia mora ny mahatakatra ny zava-misy ankehitriny amin ny famakafakana ny toe-javatra misy ankehitriny Ny antony manoloana izao toe-javatra izao.
Na dia somary aloha aza ny fanombohan'ny tsenan'ny hardware an-trano dia tsy hitazona izany ny fampandrosoana amin'ny vanim-potoana taty aoriana. Raha resaka karazana mahazatra dia saika tsy misy hantsana miaraka amin'ireo vokatra iraisam-pirenena. Na ny vidin'ny famokarana aza ambany dia ambany ary ny vidiny dia tsy. Azonao atao ihany ny mahazo tombony arakaraka ny habetsahany, raha ny teknolojia mandroso. Ny fampandrosoana ny tsena amin'izao fotoana izao dia noho ny fampandrosoana ny haino aman-jery anatiny, fa ny vokatra avo lenta dia foana foana, izay tsy ampy hahafenoana ny fangatahan'ny tsena.
Ny elanelana misy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tena lehibe. Ny fihemoran'ny dingana maro dia mitarika amin'ny fivoaran'ny fampandrosoana ara-teknolojika, ary ny vokatra dia tsy mahafeno ny fepetra takian'ny milina sy injeniera ankehitriny. Ny orinasa rehetra dia tsy afaka maminavina, mila manome antoka ny kalitao avo lenta amin'ny vokatra izy ireo ary tsy tokony hifaninana mafy amin'ny fanakorontanana ny fironana amin'ny tsena. Mba hamolavola ny tsena ankehitriny, mila mamaha ireo olana fototra avy amin'ny siansa sy ny teknolojia izy ireo. Eo ambanin'ireo toe-java-misy dia ny fampandrosoana ny siansa sy ny teknolojia dia afaka manamboatra ny orinasa amin'ny toerana tsy azo resahina ao amin'ny fampandrosoana haingana. Tsy misy zava-tsarotra hivelomana, ny olona tsy mahay mihetsika ihany no hiala, "fanavaozana" hatrany no ho iraka mafy ataon'ilay mpanamboatra hosoka antsika!